Inta badan Isbaanishka Mareykanka waxay ka walaacsan yihiin Isbedelka Cimilada | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka Cimilada waa dhibaato xagga deegaanka ah oo heer caalami ah oo khuseysa qof kasta oo bini aadam ah oo ku nool meeraha. Waxaa jira dad ka warqaba iyo kuwa kale oo aan ka warqabin. Waxaa jira qaybo bulshada ka mid ah oo aan u malaynaynin in isbeddelka cimilada uu noqon karo khatar degdeg ah, laakiin taasi, haddii ay tahay khatar dhab ah, waxay ku jiri doontaa mustaqbal fog fog oo aan iyaga u noqon doonin inay la kulmaan.
Daraasad lagu sameeyay dadka Isbaanishka ah ee ku nool Mareykanka ayaa la sameeyay si loo ogaado boqolkiiba inta sida dhabta ah uga walaacsan isbeddelka cimilada iyo saameynteeda xun. Codbixinta waxaa la qaaday kadib doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee uu ku guuleystay Donald Trump.
Sahankani wuxuu muujinayaa walaaca deegaanka Latinosku qabo. Walaacani wuxuu saddex jibaarmay afartii sano ee la soo dhaafay, in kasta oo arrimaha sida dhaqaalaha, shaqada iyo waxbarashadu ay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee aadka u khuseeya dadka Hispanic-ka ah. Marka loo eego natiijooyinka codbixinta iyo sahaminta, 88% dadka wax dooranaya ee Isbaanishka waxay muujineysaa heer ay ka walaacsan tahay deegaanka iyo isbedelka cimilada. Jebinta natiijadan, 53% waxay qirayaan inay yihiin aad u walwalsan saamaynta durba la ogaan karo iyo kan dhow, 24% xoogaa walaacsan iyo kaligiis 11% way degan yihiin leh mawduucan.
Codbixinta waxaa daabacay ururada difaaca deegaanka Sierra Club iyo Green Latinos. Ururradan ayaa sidoo kale daraasaddooda ku muujiyey in 71% dadka Hispanic-ka ee u codeeyey doorashooyinka ay rumeysan yihiin inay muhiimad weyn u leedahay u hoggaansamidda Heshiiskii Paris si wax looga qabto saamaynta isbedelka cimilada. Taasi waa sababta ugu badan ee codbixiyeyaasha Hispanic ay u tixgeliyaan inay tahay inay mudnaanta siiso Donald Trump inuu ku sii wado wadaxaajoodka iyo tilmaamaha Heshiiska Paris. Intaa waxaa dheer, heer gobol, waxay ku boorrinayaan madaxweynaha inuu soo rogo xeerar adag oo lagula dagaallamayo biyaha iyo wasakheynta hawada, iyo sidoo kale qorsheyaal cusub oo lagu ballaarinayo wax soo saarka iyo horumarinta tikniyoolajiyadda tamarta la cusboonaysiin karo.
Ugu dambeyntiina, ururradu waxay carrabka ku adkeeyeen in taageerada siyaasadahaasi ay tahay in aan laga beddelin dhammaan kooxaha dadka ka kooban Mareykanka, iyadoo aan loo eegin jinsiga, da'da ama jinsiyadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Inta badan Isbaanishka Mareykanka waxay ka walaacsan yihiin isbedelka cimilada
Dowser iyo dowsing